पहिरोले छेक्यो सडक... - Goraksha Online
दाङ,१५ असार । सदरमुकामसँग जोडिएको वडा । त्यो पनि कच्ची सडकको भर । तर त्यो सडक पनि अहिले कतै पहिरो गएको छ भने कतै भासिएको छ । जसले गर्दा सदरमुकामसँग जोडिएको घोराही उपमहानगरपालिका वडा न १९ सैघाको सडक सञ्जालको यातायातसँग सम्पर्क विच्छेद भएको छ ।
जिल्लाको प्रमुख केन्द्र घोराही–मसिना नागेश्वर मन्दिर हुँदै सैघास्थीत वडा नं. १९ को कार्यालय जाने मुख्य सडक बन्द भएको छ । त्यस्तै घोराही–होलेरी सडकखण्डको पेदीदेखि राम्चेहुदै सैघा जोड्ने सडक पनि अवरुद्ध भएको छ । ‘वडा नं. १९ लाई घोराहीसँग जोड्ने दुई सडक पहिरोका कारण अहिले अवरुद्ध भएका छन्’–वडा अध्यक्ष हर्क बहादुर घर्तीले भने–‘जसले गर्दा आजभोली वडामा बिरामी हुने मान्छेहरुलाई डोकोमा बोकेर घोराहीसम्म ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।’
वडा अध्यक्ष घर्तीका अनुसार घोराही मसिना हुदै सैघा जोड्ने सडक खण्डमा कम्तीमा १२ देखि १५ स्थानसम्म कतै पहिरो त कतै सडक भासिएको छ भने घोराही–होलेरी सडक खण्डको पेदीदेखि राम्चे हुँदै सैघा जोड्ने सडक खण्डमा ८ देखि १० ठाउँसम्म सडकमा पहिरो गएको छ ।
तत्काल सडक बनाउनका लागि वडा कार्यालयसँग स्काभेटरलगायतका साधन नहुँदा वडाबाट कामकालागि पैदल घोराही आउनुपर्ने बाध्यता भएको छ । ‘सडक अवरुद्ध भएपछि घोराहीबाट स्वास्थ्यचौकीमा जाने स्वास्थ्कर्मी, विद्यालयमा जाने शिक्षकहरु जान सक्नुभएको छैन् भने वडाबाट कामका लागि घोराही आउन समेत समस्या छ –वडा अध्यक्ष घर्तिले भने–‘घोराहीकै दुर्गम वडाका रुपमा रहेको वडावासीलाई बर्षादले समेत दुःख दिने काम गरेको छ ।’
घोराहीदेखि वडा कार्यालयसँग जोड्ने भरपर्दाे सडक नहुँदा बर्षेनी सैघावासीले दु.ख पाउने गरेका छन् । केही दिनयता लगातार परेको बर्षादका कारण घोराही–होलेरी सडक खण्डसमेत अवरुद्ध रहेको छ । त्यसैगरेर लगातारको वर्षाको कारण अधिकास कच्चीसडक अवरुद्ध भएका छन् । विशेषगरेर जिल्लाका पहाडी गाउँमा निर्माण भएका कच्ची सडकमा लगातारको वर्षाले क्षती गरेको छ ।
बगलाचुली गाउँपालिकाका गाउँमा खनिएका कच्ची सकडपनि अवरुद्ध भएको स्थानीयले जनाएका छन् । स्थानीयतहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएसँगै गाउँ गाउँमा सडक सञ्जाल पुराउने काम भएको छ । पुर्वाधारको अधिकास बजेट सकड निर्माणमा लगाउने काम भएको छ । तर निर्माण भएका कच्ची सडकमा नाली छैनन् । नाली नभएको कारणले वर्षायाममा सडकहरु भत्कने र भासिन गरेका छन् । त्यसैगरेर जथाभावी रुपमा मेसिनरी औजार प्रयोग गरेर सडक खनेको कारण वर्षायामा पहिरोको पनि त्यतिकै जोखिम छ ।
दंगीशरणमा दुई जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि